Nzira yekuvandudza Amazon kutengesa sei kwandiri somutengesi wechidiki kune uko?
Amazon ichokwadi "behemoth" yezvino mazvitengesi zvekutengesa zvekutengesa. Yaiva yakashamisika zvikuru, neicho chakanga chagadzirirwa uye chakatangwa semabhuku ekushambadzira paIndaneti (makore anodarika makumi maviri apfuura), zvino yaonekwa sechinhu chaicho chikuru. Unogona kufungidzira here mamiriyoni gumi anopfuura makumi matatu ari kurarama kushanyira shopper kunofungidzirwa kuti iyo yakawanda yemisika yemisika? Ndokusaka mutengesi wezuva ranhasi achida kuziva nzira yekuvandudza maAmerica yekutengesa ikozvino - curso de ingles gratis en new york.
Chii chavanofanira kuziva? Nzira yekuvandudza Amazon kutengesa nehuwandu hwemotokari inotengeswa kuzvinhu zvavo? Ndezvipi zvakagadzirwa zvikamu zvino zvinobatsira zvikuru? Zvichingoenda zvakadaro. Kana iwe iwe, uri mutengesi mucheki pamusorosoro wemakemikari wepamusoro wemasikati anotonga ikoko, nyaya yekuvandudza Amazon kutengesa haisi mubvunzo. Sei? Zvichida nokuti pasina ruzivo rwakakwana uye unyanzvi-uye-hwakavonekwa unyanzvi hwakanaka hunenge husingakwanisi kuponeswa mune imwe nzvimbo yemisika. Ndicho chikonzero pasi apa ndichaenda kukuratidzira nzira yekuvandudza Amazon yako yekutengesa - uye dhonza chikwata chako chekugadzira pamusoro pekutsvaga kwekugadzirwa kwezvinhu, kunyange iwe uchiri kunzwa uine semudzimai wemabhizimisi anotengesa ikoko kwekutanga.
Nzira yekuvandudza Amazon Sales - Icho Chinyorwa Cheku Novice Sellers
Achifunga kuti Amazon inonyanya kufunga nezvekupa ruzivo rwekutenga zvakanaka, hazvishamisi kuti pane mitemo yemirairo kune mutengesi wese kuti vateerere. Zvinhu zvose zviri nyore - kana iwe usingavatevere, unogona kurambidzwa zviri nyore kubva pakushandisa bhizinesi rako rezvekutengesa uko (mumamiriro ezvinhu akaipisisa, iwe ungagamuchirawo kurambidzwa zvachose). Saka, kana iwe usingadi kuverenga iyo yose maAmerica mazano emitengo, hezvino ndiyo inofanira kubhadharwa iwe kunyatsofungisisa. Kwete kuzovandudza kutengesa kwako kuAmazon, asi zvishoma kuti urarame pamusoro apo uye uchitanga kufamba nenzira inoenda kune yako yekutengeserana kubudirira semutengesi anotungamira mune zvigadzirwa zvako.
Unofanira kugara uchiwana mitemo nemitemo,.
Kuchengetedza maitiro akanaka ekugadzirwa kwezvinhu uye kugadziriswa kwakanaka kwevatengi - ingangodaro ndiyo nzira chete yekuzvigadzirisa semutengesi anobudirira muAmazon kuti pakupedzisira ave mutengesi mukuru-nguva inokosha kutenga.
Ramba uchikurukurirana nguva chaiyo nevatengi vako. Kukurumidza kupindura kune chero chinhu chipi zvacho chakaipa, uye pamwe nekupindura mibvunzo yevabereki chero ipi neipi pamusoro pebasa rako kwete kwemaawa masere makumi maviri nemaviri - haisi chero rudzi rwehupfumi. Ndiyo tsika inowanzogamuchirwa yekutsigirwa nevatengi kunoteverwa nevose vanoita zvebhizimusi vanoita zvekutengesa kune imwe nzvimbo muIndaneti.
Nhoroondo huru yekutsvakurudza inofanira kugara ichiendeswa kune umwe neumwe mutengi anotenga newe kuAmazon.
Zvinhu zvose zvaunenge uchizvitengesa zvinofanira kubatsirwe nemagadzirirwo emifananidzo yakamanikidzwa inoratidza mararamiro ose ezuva nezuva nekushandiswa kwemazuva ose. Cherechedza, zvisinei, kuti pane imwe chigadzirwa chechigadzirwa UNOFANIRA kuva nemuvara wakachena.